Mid ka mida musharaxinta maamul Jubbaland oo deeq isugu jirta dawwo iyo lacag gaarsiiyay cisbitaalka Kismaayo(Sawirro) – Radio Daljir
Mid ka mida musharaxinta maamul Jubbaland oo deeq isugu jirta dawwo iyo lacag gaarsiiyay cisbitaalka Kismaayo(Sawirro)
Abriil 18, 2013 9:05 b 0
Kismaayo, April 18- Gudoomiyaha xisbiga nabadda,caddaaladda iyo hormarka kana mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka Jubbaland Sh. Maxamed Ibraahim (Shakuul) ayaa maanta deeq isugu jirta dawwo iyo lacag gaarsiiyay cisbitaalka dhexe ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose.
Sheekh Shakuul ayaa mid mid u booqday qolalka ay ku jiraan bukaanada, isagoo booqashadiisa iyo xog uruursi ka dibna mid mid u guddoonsiiyay lacago shilin Soomaaliya oo gaaraysa 200 oo kun, wuxuuna la sheekaystay qaar ka mida bukaanada.
Musharaxa ayaa shacabka reer Kismaayo u balan qaaday inuu dayactir iyo hormarin uu ku samayn doono dhinacyada arimaha bulshada gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada.
Waa musharixii ugu horeeyay oo booqda xarumaha bulshada ee Kismaayo, waxaana tani ay noqonaysaa mid ka mida tallaabooyinka xildoonayaasha ay ku doonayaan inay ku kasbadaan rabitaanka shacabka Jubbooyinka.